Manni maree Ameerikaa bajata irratti waan waliigaluu dadhabeef hojiin cufame - BBC News Afaan Oromoo
Manni maree Ameerikaa bajata irratti waan waliigaluu dadhabeef hojiin cufame
22 Amajjii 2018
Goodayyaa suuraa Tajaajjilli waajjiraalee federaalaa fi paarkonni biyyooleessaa cufamanii oolu
Cufamuu waajjiraalee dhaabuuf Seeneetiin walfalmaa waayita jirutti hojjattoonni kumaatama dhiibbaan lakkaa'aman Wiixata kana akka hojii irratti hin argamne beekame.
Dhaabbachuun hojii kun kan eegale Jimaata halkan yeroo ta'u, manni maree biyyattii bajata federaalaa ilaalchisee waliigaltee irra gahuu waan dadhabaniifi.
Utuu torbee hojii kun hin jalqabin ijibbaatni godhames Dilbata galgala fashelaa'eera.
Cufamuu hojii kana gara xumuraatti fiduuf sagalee caalmaan murteen kennamu gara Wiixata waaree boodaatti darbeera. Kana jechuun, waajjiraaleen mootummaa cufaa ta'anii turu jechuudha.
Haala biyyattii keessatti hin amaleeffataminitti, manni maree guyyaa hojii alatti walga'ii geggeesaniyyuu sababa walqeeqa senaataroota Dimokraatii fi Rippablikaanii irraa kan ka'e waliigaltee quubsaa irra gahuu hin dandeenye.
Rippablikaanoonni baajataan walqabachiisanii Pireezidant Tiraamp akka imaammata godaantummaa (koolu galtoota) irratti waligaltee godhan wayita fedhan, warri Rippablikaanotaa ammoo yeroo tajaajilli mootummaa dhaabbatee jiru kanatti mareen akkanaa gonkumaa hin danda'amu jedhu.
Rippablikaanoonni dhimma nageenya daangaafi dallaa daangaa Meeksiikoo irratti hojjatamuufis ta'e seera goodaansaa haaromsuu fi baasii humna waraanaa dabaluu ilaalchiseebaajata barbaadu.
Mariin Dilbata irra geggeeffame kun akka lakkoofsa Ameerikaatti halkan keessa sa'aatii afur irratti kan dhaabbate wayita ta'u, sagalee kennuu ilaalchisee Wixata ganamatti kan qabamee ture gara waaree boodaatti dabarsuun xumurameera.
Waliigaltee irra gahuu dadhabuu jechuun, hanga dhimmi kun furmaata argatutti hojjattoonni federaalaa hedduun kaffaltii tokko malee boqonnaa irra turu jechuudha.
Murtee partii aangoo irra jiru Seneetiitti dhiheesse tokko dabarsuuf miseensoonni mana marii harka 100 keessa harki 60 irratti waligaluu qaba.
Warri Reppablikaanii ammoo seenaataroota 51 qabu, kanaafuu bajata kana dabarsuuf dimookraatota tokko tokko irraa sagalee argachuu isaan barbaachisa.
Haala akkanaan hojiin dhaabbachuun kun yeroo jalqabaa miti, dhiheenyatti bara 2013 keessa kan mudatee ture wayita ta'u waajjiraaleen mootummaa guyyoota 16f cufamanii turaniiru.
Kana irraa kan ka'es mootummaan doolaara bil 2 ol kan dhabe yeroo ta'u ''diinagdee biyyattii irrattis dhiibbaa qabatamaa fideera,'' jechuun OBM yeroo sana dubbateera.
Biyyoota Arabaa sadii lammiileen dhaqanii hojjechuu danda'an
Walitti dhufeenyi daldala Itiyoo-Eertiraa toora qabataa laata?
''Dubartoota kan muudne oolmaa ooluuf osoo hintaane, biyya ijaaruuf''
Abdii Mohaammad hidhaa miliquuf yaalee ture
Maan Yunaayitid vs Cheelsii dhuma torbee kanatti
Fayyisaa Leellisaa Dilbata gara biyyaatti deebii'uuf
Poolisiin reeffa Kaashogi 'daggala keessa barbaachutti ka'e'